Wararkii ugu dambeeyey Cadaado & Dhuusamareeb - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Wararkii ugu dambeeyey Cadaado & Dhuusamareeb
January 17, 2018 admin369
Hadii aan ku bilowno Magaalada Cadaado ayaa tan iyo xalay waxaa ka socday shirar isdaba joog ah oo ay yeelanayeen waxgaradka deegaanka. waxaana goordhow soo gabagaboobay shirkii ugu dambeeyey. Saxaafadda ayaa dibad joog ka aheyd shirarkaas, waxaana xogta ka soo baxaysa shirarkaas sheegeysaa Reer Cadaado ay ku adkeysteen go’aankoodu hore oo ahaa in ay qaadaceen heshiiska Ahlu sunna iyo Galmudug.
Jawiga Cadaado waa mid dagan, dadkuna waxay wataan howl maalmeedkooda, meelaha bulshadu ku kulanto sida Hotelada ayaa laga dareemayaa saxmadda siyaasadda, Dhanka kale waxaa wali Cadaado ku sugan Wasiirudowlaha Howlaha Guud DFS Axmed Qoorqoor iyo Xildhibaan Abtidoon Yare, iyagoo bulshada kulamo ay la qaateen waxgaradka deegaanka u booriyey in la ilaaliyo nidaamka iyo kala dambeynta.
Dhanka Dhuusamareeb Waxaa maanta dib u dhacay munaasabadii lagu saxiixi lahaa heshiiska Galmudug iyo Ahlu sunna, Madaxweynaha Puntland C/wali Gaas iyo Madaxweynaha KoofurGalbeed Shariif Xasan ayaa gaaray halkaas, waxaana horey u joogay Madaxweynaha Qaranka Maxamed Farmaajo, Madaxda Hirshabeele, Galmudug, Banaadir iyo masuuliyiin kale.
Lama oga sababta rasmiga ah ee dib u dhaca xafladda, waxaana Madaxda Dhuusamareeb ku sugan hadda shir uga socdaa Hoyga uu dagan yahay Madaxweyne Farmaajo, iyagoo ka arinsanaya waxa laga yeelayo gadoodka Cadaado. dhanka Bartamaha Dhuusamareeb waxaa lagu dilay nin rayid ah oo waday gaari dhagax leh, waxaana dilay askari ka tirsan ciidanka Ahlu sunna. Dhuusamareeb ayaa la ciirciiraysa marti farabadan.